Homesteads | Hultsfred मा जानुहोस्
अधिक संस्कृतिको अनुभव लिनुहोस्!
ईतिहासको पखेटा महसुस गर्नुहोस्! नगरपालिका वरिपरि हामीसँग राम्रा घरहरू र घरहरू पार्कहरू छन्। तपाईं विगतमा कसरी बस्नुभयो? तपाई कसरी बस्नुभयो? यहाँ तपाई फार्महरू र वातावरणको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ जहाँबाट प्रत्येक फार्म वा पार्कले आफ्नो कहानी बताउँदछ।
मल्लीला - गोर्वेद स्थानीय इतिहास पार्क
Målilla Gårdveda Hembygdspark स्वीडेनको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा सक्रिय होमल्याण्ड पार्कहरु मध्ये एक हो। गतिविधिहरू यहाँ सबै बर्ष लाग्छ र पार्क लगातार नयाँ आकर्षणको साथ विस्तार भइरहेको छ। IN
Virserum को गृहनगर पार्क
Virserums Hembygdspark १ults औं शताब्दीदेखि आधुनिक समय सम्म लगभग १ buildings वटा भवनसहित Hultsfred नगरपालिकाको Virserum मा एक घर पार्क पार्क हो। क्षेत्रका भवनहरूले स्थान चित्रण गर्छन्
१ the औं शताब्दीका फ्रिरेडा स्टोरगार्ड कल्मार काउन्टीको वास्तु स्मारक मध्ये एक हो। १ retain औं शताब्दी देखि एक Småland खेती गाउँ को चरित्र स्पष्ट देखाउँदछ कि यो आफ्नो राखिएको निर्माण अवस्था संग फार्म जटिल
Hembygdsgården एक लहरदार धारा र एक पानी झील पोखरी संग एक प्राकृतिक वातावरण छ। धेरै मूल्यको धेरै भवनहरूको साथ भेनाबेग्डेनको लागि महान मूल्यको गृहनगर केन्द्र
Mlrlunda-Tveta होमस्टेड - ब्लुबर्सकुलन
मर्लुन्डा-ट्वेटा हेम्बाइग्ड्सफेरनिंग १ 1963 .1965 मा गठन भएको थियो र १4XNUMX in मा हेम्ब्याग्ड्सम्रडेटमा पहिलो भवन निर्माण गरिएको थियो। तथाकथित "टर्कस्टुगन" ()) जुन सबैभन्दा सानो मानिन्छ